Uyenza njani i-infographic | Abadali be-Intanethi
Uyenza njani i-infographic
Esinye sezixhobo onokuthi utsale ingqalelo ngokubonakalayo yi-infographics. Ukuba ujonga iiakhawunti zenkampani (kwiintanethi zentlalo) phantse zonke zibhenela kwezi ukushwankathela ulwazi oluthile kwaye ayikruquki, kodwa ngokuchaseneyo. Kodwa ungayenza njani i-infographic?
Ukuba njengomyili le projekthi ifikile kuwe, okanye ungumrhwebi kwaye ufuna ukuba ne-infographics ongayibonisa kwiintanethi zentlalo ukuze babone ukuba ulawula isihloko, oku kunomdla kuwe. Ngokuqinisekileyo ngale nto sikuxelela yona uya kuyazi into omawuyenze kwaye njani.
1 Yintoni i-infographic
2 Uyenza njani inyathelo le-infographic ngenyathelo
2.1 Yintoni omawuyenze ngaphambi kokuba ube netemplate
2.2 Yintoni omele uyenze emva
3 Apho ukwenza i-infographic
Kodwa ngaphambi kokukunika amanyathelo ekufuneka uwathathe ukwenza i-infographic, kulula ukuba uyazi kakuhle into esibhekisa kuyo.
I-infographic yindlela yokubonisa idatha usebenzisa isicatshulwa kuphela, kodwa iimephu, iitafile, imizobo, imifanekiso, iigrafu, njl. ukuze ulwazi olunikiweyo lube lula kwaye lube lula ukuluqonda. Kunokwenzeka ukuba unokwenza umxholo osebenzisanayo ngaphakathi kwe-infographic, ukuqonda oku njengendlela yokuba umsebenzisi asebenzisane nomxholo (umzekelo, iigraphics ezihamba ngokwekhesa okanye isicatshulwa esibonakala siskrolela phantsi).
Alithandabuzeki elokuba ngumxholo oya usiba namandla ngakumbi kwaye usetyenziswa kuwo onke amacandelo. Enyanisweni, inokusetyenziswa kuzo zonke. Indlela obonisa ngayo iziphumo, ngendlela elula neyonwabisayo, nangendlela ehlekisayo, yenza kube lula ukukhumbula. Ukongeza, kwandisa kakhulu ukubonakala kwiintanethi zentlalo, ngakumbi ukuba ihamba kunye ne-carousel (imifanekiso emininzi kupapasho olufanayo).
Kuyo yonke le nto, kunye nokunye okuninzi, i-infographics iyanda ukusetyenziswa. Kwaye ukwenza uyilo olulungileyo kubalulekile kuba ukuba akutsali ngqalelo akunto yanto.
Kodwa ungakwenza njani?
Uyenza njani inyathelo le-infographic ngenyathelo
I-infographic ayinzima ukuyidala. Ungayenza ukusuka ekuqaleni, okanye ungathatha itemplate yasimahla okanye ehlawulweyo kwaye uyenze ngokwezifiso ngolwazi oludingayo. Kodwa zonke i-infographics zineempawu ezifanayo: ukulandelelana kolwazi. Awunako ukwenza enye ngesihloko sokulima kwaye ulwazi lujongene nezoqoqosho, imidlalo yevidiyo kunye noncwadi. Indlu ayikho.
Ke ngoko, apha sikunika amanyathelo phambi kokufumana loo template (okanye ukuyidala).
Yintoni omawuyenze ngaphambi kokuba ube netemplate
Ngaphambi kokuba uqale ukudala i-infographic, into yokuqala oyifunayo yidatha. Kwaye kungekhona nje idatha, kodwa isifundo. I-infographic kufuneka igxininise kwisihloko esinye. Ziyakwazi ukuba yidatha yezibalo, zichaze ingcamango, zishwankathele uxwebhu ... Kodwa kungekhona yonke into ngexesha elifanayo kunye namacandelo ahlukeneyo okanye izihloko.
Umzekelo, unokwenza i-infographic malunga nenani lezilwanyana zasekhaya ezinazo iintsapho zaseSpain; okanye malunga nezityalo zangaphakathi ezinetyhefu kwiikati; okanye iziphumo zokusetyenziswa kweintanethi zentlalo kulo nyaka uphelileyo. Konke oku kunokuba yinto ekruqulayo ukuyifunda, kodwa kwi-infographic enee-vectors, imifanekiso, iigrafu, njl. ide ibe mnandi.
Oko kuthetha ukuba kuya kufuneka wenze uphando lwedatha ukuze ube nento oyifunayo ukuze uququzelele ezo mbono kwaye wenze uxwebhu. Abaninzi bakholelwa ukuba xa unolwazi, ukulungelelanisa kunye nokuqala ukuzoba i-infographic ngokwaneleyo, kodwa sincoma ukuba wenze inyathelo eliphakathi, ngakumbi ekuqaleni kuba liya kukunika umbono ongcono malunga nokuba yeyiphi ingcaciso ebalulekileyo kwaye kufuneka ibe yintoni. kulo yilo.
Yintoni omele uyenze emva
Nje ukuba unolwazi kwaye uwazi amanqaku aphambili oza kukongeza kwi-infographic, inyathelo elilandelayo liya kuba kukufumana itemplate ye-infographic, okanye uzenzele ngokwakho.
Kwimeko yokuqala, unokufumana ezininzi iitemplates zasimahla kunye nezihlawulweyo. Isindululo sethu kukuba ukhethe lowo usondele kakhulu kuyilo olunokwenzeka ocinga ngalo kuba luya kwenza umsebenzi wakho ube lula kwaye kuya kuthatha ixesha elincinci ukugqiba uyilo.
Ukuba, kwelinye icala, uthatha isigqibo sokuyenza ngokwakho, siyakucebisa ukuba ube netemplate yombono, hayi ukuba uyisebenzise, ​​kodwa ukukukhuthaza. Kwaye ngubani othi itemplate enye, ithi ezininzi kwaye uthathe oko uthanda kakhulu kuyo nganye ukuze uyidibanise kweyakho.
Uyilo lwe-infographic mhlawumbi luya kukuthatha kakhulu. Kwaye kuya kufuneka unikele ingqalelo kwiinkcukacha ezithile ezinje:
Musa ukukopa ezinye iitemplates. Unokuphefumlelwa, kodwa ungakopi.
Ukuba zonke izinto zidityaniswe kakuhle: imizobo, imifanekiso, isicatshulwa, njl.
Ukuba umbala unomdla wokufunda kwaye kwangaxeshanye utsalela ingqalelo kwi-infographic.
Uchwethezo oluhle, olufundekayo kwaye ngaphezu kwayo yonke into ehambelana nomxholo. Sukusebenzisa ifonti yevintage ukuba isihloko sakho simalunga neetekhnoloji ezintsha kwixesha elizayo. Umzekelo.
izixhobo ezifanelekileyo. Oko kukuthi, musa ukuyitshaja kwakhona. Kuphela izinto eziyimfuneko kunye nokukwazi ukuba lula. Ngapha koko, uninzi lwe-infographics lusekwe kwimifanekiso ye-vector kunye nee-icon, kodwa kunzima ukusebenzisa iifoto.
Apho ukwenza i-infographic
Ngokuqhelekileyo, i-infographics yenziwe ngeenkqubo zokuhlela umfanekiso. Nangona kwi-Intanethi unokufumana izixhobo ezininzi eziza kukunceda kulo msebenzi kwaye zikhululekile. Kwaye, ezininzi zineetemplates onokuzisebenzisa ukuba usenzile eso sigqibo.
Ezinye zezi sicebisayo zezi:
Iseyile. Yenye yezona ziyaziwa kwaye zisetyenziswa, kungekuphela nje ukwenza i-infographic, kodwa kwezinye iiprojekthi ezininzi. Ewe kunjalo, khumbula ukuba unenguqulelo yasimahla eya kukhawulwa kunye nenguqulelo ehlawulweyo.
Impindezelo. Le yenye yezona zisetyenziswa kakhulu. Ngenguqulelo yasimahla unokwenza kuphela i-5 infographics, kodwa kufanelekile ukuzama. Kwaye ukongeza okongeziweyo: kungeSpanish.
Easel.ly. Esi sesinye sezixhobo onokuzisebenzisa kwaye esikunika iitemplates ezahlukeneyo ukuze ukwazi ukuzenzela kwaye wenze uyilo lwakho lokugqibela kwimizuzu embalwa. Emva koko ikuvumela ukuba uzikhuphele kwiifomathi ezahlukeneyo okanye wabelane ngokuthe ngqo kwi-intanethi (sincoma ukhetho lokuqala).
Njengoko ubona, ukwenza i-infographic akukho nzima. Kodwa idinga ixesha, ngakumbi ekuqaleni, kuba ukuyenza ibonakale ilungile, kufuneka ubeke ingqalelo kuzo zonke iinkcukacha ezibonakalayo kwaye ugcine engqondweni, ngandlela thile, eminye yemigaqo yoyilo lwegraphic oluya kwenza uyilo lwakho lugqibelele. . Ngaba unesibindi kuyo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Uyenza njani i-infographic
Blogger okanye Wordpress